CHRISTMAS အဓိပ္ပါယ်နှင့် “မွေးနေရှင်၏ တောင်းဆိုချက်” | Shwe Canaan TV
CHRISTMAS အဓိပ္ပါယ်နှင့် “မွေးနေရှင်၏ တောင်းဆိုချက်”
00Truth Tuesday,2December 2014
၂၀၁၀- ခုနှစ်၊ နှစ်စမှစ၍၊ ယနေ့ဒီဇင် ဘာလ တိုင်းအောင် စောင့်ထိန်းတော် မူသော ဘုရား သခင် ၏ နာမတော်သည်၊ ဘုန်းကြီးစေတည်း။(အာမင်) ကျွနု်ပ်တို့ ခရ...
၂၀၁၀- ခုနှစ်၊ နှစ်စမှစ၍၊
ယနေ့ဒီဇင် ဘာလ တိုင်းအောင် စောင့်ထိန်းတော်
မူသော ဘုရား သခင်
၏ နာမတော်သည်၊ ဘုန်းကြီးစေတည်း။(အာမင်)
အများစုသည်၊ ဒီဇင်ဘာလ ရောက်ပြီဆိုလျှင်
လူတိုင်း၏စိတ် ထဲမွာ ခံစားမှုကိုယ်စီရှိကြသည်။ သို့ဖြစ်၍နှစ်၏ နောက် ဆုံးလဒီဇင်ဘာ (၁) ရက် ရောက်ပြီဆိုလျှင် Sweet ဒီဇင်ဘာ၊ ချို မြိန်သောဒီဇင်ဘာလဟူ၍ ပင်ခေါ်စမှတ်ပြုကြလေပြီ။ မယုံကြည်သူများကလည်း ဒီဇင်ဘာလကို စီးပွားရေးအတွက် အမြတ်ထုတ်ပြီး၊ Christmas (decoration) အလှပြုပြင်ပြီး၊ စတိုးဆိုင်များမှာ၊ ပစ္စည်းအရောင်း
တွင်အောင်ကြော်ငြာ အမျိုးမျိုးပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ Christmas တေးအမျိုးမျိုးလွှင့်ပြီး၊ စီးပွားရှာလျက်ရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်တချို ့သည်လည်း ဒီဇင်ဘာ၊ (Christmas) အချိန်မှာ၊ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ငွေရရှိရေးကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ဒီဇင်ဘာလသည်၊ ခရစ်တော်၏မွေးနေ့လဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ခံယူထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာလူသားအားလုံး ဒီဇင်ဘာလသည်၊ ခရစ်တော်မွေးသည့် လဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ကြသည်။ သို့သော်ကျမ်းစာ၌မရှိပါ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၅) ရက်သည် ခရစ်တော်မွေးသောနေ့ရက်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ဖြင်းကြောင့်သာ၊ ဤလကို Sweet ဒီဇင်ဘာ၊ ချို မြိန်သောလဟုခေါ်ဆိုလျက် အမြတ်တနိူးထားနေ ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နေ့ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ တမန်တော်ပေါလုက၊နေ့ရက်တရက်ထက်တရက်သာ၍မြတ်သည် ဟု လူ အချို ့ထင်တတ်၏။ လူအချို ့မထင်။ လူတိုင်းမိမိစိတ်သဘောကျပါစေ။ (ရောမ ၁၄း၅)။ သို့ဖြစ်၍၊ နေ့ရက်ကို စောင့်သောသူသည်၊ သခင်ဘုရားကို ထောက်၍စောင့်၏။ နေ့ရက်ကို မစောင့်သောသူသည်လည်း၊ သခင်ဘုရားကို ထောက်၍မစောင့်ဘဲနေ၏။ သို့ဖြစ်၍၊ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်အတွက်စောင့်ဘို့သာ အဓိကဖြစ်လေသည်။
ကျွနု်ပ်တို့ခရစ်ယာန် အမ်ားစုမွာ (Christmas) ရောက်ပြီဆိုလျှင် အသင်းတော် ၌ အလုပ်များရှုပ်ရှက် ခတ်လျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရမည်။ ဘုရားကျောင်း (Decoration) အလှဆင်ခြင်းအတွက်၎င်း၊ စားရေးသောက်ရေး အတွက်၎င်း၊ ငွေကြေးရှာဖွေရေး (ဘဏ္႑ရှာဖွေ) ၌ စိတ်ပူပန်လျက်ရှိကြသည်။ တချို ့ကဈေးရောင်းပွဲ အားဖြင့်၎င်း၊ တချို့က (Carol) တေးသီချင်းများကို တညလုံး၊ မိုးလင်းပေါက် သီဆိုလျက် Happy Christmas to You သီချင်းကိုကျူးဧရင်း၊ တံခါးထု၊ ပိုက္ဆံယူ ခဲ့ကြသည်ကို မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်မှာ တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို ရရှိသော ငွေကြေး မ်ားကို အဘယ်အတွက်သုံးစွဲပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့သည်မှာ၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရရှိရေးအတွက် အသုံးပြုကြသည်ကို မတွေ့ရပါ။ Christmas ပျော်ပွဲ၊ရွှင်ပွဲ၊ စားသောက်ရေးအတွက်သာ အကုန်ခံနေကြသည်ကိို တွေ့ရှိရလေသည်။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ။ ယခုနှစ်၊ Christmas ရာသီမွာ၊ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲမှာ ဖေါ်ပြသော၊ အကြောင်းများကို ေ၀ငှလိုပါသည်။ အသီး အနှံ သိမ်းရာကာလလွန်ပြီ။ နွေကာလကုန်ပြီ။ ငါတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြ (ယေရမိ ၈း၂၀)။
ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်များ ဒီဇင်ဘာ (Christmas) မွာ၊ မွေးနေ့ကျင်းပပြီး၊ ဧပြီလရောက်ပြီဆိိုလျှင်၊ ခရစ်တော် အသေခံသောနေ့ ကိုကျင်းပကြပါသည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာ (Easther) Sunday ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပွဲ တော်ကို ကျင်းပကြပြန်သည်။ ကောင်းကင်တက်ပြီး (၁၀) ရက်ကြာသော အခါပင်တေကုတေ္တပွဲ့နေ့ကို ကျင်းပပြန်သည်။ ဒီလိုနှင့်၊ မိုးမွ၊ နွေ၊ နွေမှဆောင်းရာသီအလီလီ ကူးပြောင်းခဲ့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်ယာန်များသည် ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချ မှုမရှိဘဲ၊ ခရစ်တော်၏ Birthday ကို၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျင်းပလာခဲ့ကြပါသည်။
ချစ်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၊ ယခုနှစ်မှာလည်း၊ အရင်နှစ်များကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ် မရွိ၊ အကျိုးမဲ့ ကျင်းပကြဦးမည်လော။ အကယ်စင်စစ် Christmas ဟူသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ၉ လုံး သည် တခုစီ အဓိပ္ပါယ် ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
C = Christ = ခရစ်တော်
H = Herod = ဟေရုဒ်မင်း
R = Redeemer = ကယ်တင်ရှင်
I = Israel = ဣသေရလ
S = Sheepherd = သိုးထိန်းများ
T = Three wise men = ပညာရှိသုံးပါး
M = Manger = နွားစားခွက်
A = Angel = ကောင်းကင်တမန်များ
S = Star = ကြယ်မင်းကြီး
ဤစကားလုံး တလုံးစီသည် ကျွန်ုပ်တို့အား တရားဟော ပြောလျက်ရှိလေသည်။ ဂါလိလဲပြည်၌ ဟေရုဒ်မင်း သည်စော်ဘွားအရာ၌ အုပ်စိုးစဉ်၊ ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်၊ ဣသေရလ အမျိုးမှ ပေါ်ထွန်းလျက်၊ နှိမ့်ချစွာ ဗက်လင်မြို ့နွားစားခွက်၌၊ သိပ္ထား ခြင်းခံရလေ၏။ ထိုအချိန်၌ ကောင်းကင် တမန်ကလည်း ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိကြနှင့်။ လူအပေါင်းတို့သည်၊ အလွန်၀မ်းမြောက်၊၀မ်းသာစရာသတင်းကို ငါသည် သင်တို့အားကြားပြောရ၏၊ ယနေ့တွင်ဒါ၀ိဒ်မြို ့၌သခင်ခရစ်တော်တည်းဟူသော ကယ်တင်သောရှင်သည်၊ သင်တို့အဘို့ အလ့ိုငှါ ဘွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီဟူ၍ သိုးထိန်းတို့အားပေါ်ထွန်းသည်ကို တွေ့ရ၏။
ထိုအချိန်မှာ၊ အေရွ ့ပြည်မှ ပညာရှိတို့သည် ယေရုစလင်မြို ့သို့ရောက်လာကြလျှင်၊ အေရွ ့ပြည်၌သူ၏ ကြယ်ကို ငါတို့မြင်ရသည် ဖြစ်၍ ဖူးတွေ့ ပူဇော်ခြင်းငှါ၊ ရောက်လာပြီဟု မေး မြန်း ပြောဆိုကြ၏။ ဤသည်မှာ (Christmas) ဟူသောစကားလုံး (၉) လုံး၏ ဆိုရင်း အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်လေသည်။
ဤေနရာ၌ အေသအခ်ာ လေ့လာလျှင်၊ ဟေရုဒ်မင်း သည်၊ နှုတ်အားဖြင့် ခရစ်တော်ကို ဖူးတွေ့ ပူဇော်မည်ဟုဆိုသော်လည်း၊ မာဂုပညာရှိများလှည့်ဖြားသည်ကို သိလျှင်ပြင်းစွာအ မျက်ထွက်၍ လူကိုစေလွှတ်သဖြင့်၊ မာဂုပညာရှိတို့၌၊ စေ့စေ့မေးမြန်းပြီးသော ကြယ် ၏ အချိန်ကာလ ကို ထောက်၍ဗက်လင်မြို့မွ စေသာ၊ ကြေးလက်ရှိသမျှတို့ ၌၊ နှစ်နှစ်အရွယ် မွစ၍၊ ထို အရွယ်အောက်ယုတ်သောသူငယ်ယောကျ်ားအပေါင်းတို့ကိုသတ်စေ၏ (မဿဲ ၂း၇-၁၆)။ ဟေရုဒ်မင်းသည် ခရစ်တော် ကယ်တင်ရှင်မွေးဖွားလာမည်ကို ဦးနှောက်ဖြင့် သိသော် လည်း အသက္တာ၊ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ဖူးတွေ့လိုသော ဆန္ဒမရှိပါ။ ထို့အတူယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် ကျမ်းပြု ဆရာရှိသမျှတို့ သည်လည်း ခရစ်တော်ဖွားမြင်မည့် နေရာကို အတိအက် သိကြသော်လည်း ခရစ်တော်နှင့် ဖူးမြင်ခြင်းမရှိ ကြပါ။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ။ သင်သည်လည်း ခရစ်တော် အကြောင်းကို ခေါင်းဖြင့် သိသော်လည်း၊ စိတ်၀ိညာဉ်ထဲမှာ သိကျွမ်းခြင်းမရှိလျှင်၊ Christmas ပြဲ တော် ကျင်းပနေခြင်း သည်အဓိပ္ပါယ် မဲ့ အကျိုးမရှိ၊ အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မွေးနေ့ရှင်ခရစ်တော် ယေရှုမပါဘဲ၊ မွေးနေ့ကျင်းပနေခြင်းသည်၊ မွေးနေ့ရှင်အတွက်ကျေနပ်အားရ၊စေနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကို အမှန်တကယ်သိကျွမ်း ပြီးမှသာလျှင်မွေးနေ့ Christmas ကိုကျင်းပသင့်ပါသည်။ တမန်တော်ပေါလုက ဤသို့ကျမ်းစာ၌ ရေးသားခဲ့လေသည်။ ငါတို့သည်လောကီ၀ိညာဉ်ကို မခံရကြ။ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူ သောအရာတို့ကို သိခြင်းအလိုငှါ၊ ဘုရားသခင်ထံတော်မှာကြွလာသော ၀ိညာဉ်ကို ခံရကြ ပြီ။ (၁ ကော ၂း၁၂)။ ထိုနည်းတူစွာသင်တို့သည် သားဖြစ်သောကြောင့် အဗ္ဗ အဘဟုခေါ်တတ် သောသားတော်၏ ၀ိညာဉ်တော်ကို သင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူ၏ (ဂလာတိ ၄း၆)။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများ ခရစ်တော်၏ ၀ိညာဉ်ကိုမရလျှင်၊ ခရစ်တော်နှင့် မဆိုင် ဟူသော အခ်က္ကို သိစေလိုသည်။ ခရစ်ကေးသို့ ရောက်လိုသောသူတ0ည်သည်ကား ခရစ်တော်နှင့် မဆိုင် (ရောမ ၈း ၉)။
မဿဲခရစ်၀င် ကျမ်း၌ အရှင်ယေရှုကရှင်းလင်းစွာ ဤသို့ဖေါ်ပြခဲ့လေသည်။ သခင် သခင်ဟုငါ့ကို လျှောက်သောသူတိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့၀င်၇လိမ့်မည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ခမည်းတော်၏ အလိုကိုဆောင်သောသူသာလျှင်၀င်၇လိမ့်မည်။ ထိုနေ့၌ကား၊ သခင်၊ သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့် ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လော။ ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့်နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်ပြီမဟုတ်လော။ ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့် မ်ားစြာ သောတန်းခိုးတို့ကိုပြပါပြီမဟုတ်လောဟု များသော သူတို့သည် လျှောက်ကြလိမ့်မည်။ ထိုသို့လျှောက်ကြသောအခါ၊ သင်တို့ကို ငါအလျှင်းမသိ။ အဓမ္မအမှုကိုပြုသောသူတို့၊ ငါ့ထံမွ ဖယ်ကြဟု ထိုသူတို့အားအတည့်အလည်းငါပြောမည် (မဿဲ ၇း၂၁-၂၃)။
သို့ဖြစ်၍ သခင်၊ သခင်ဟုနှုတ်ဖြင့်သာ ပြောဆိုရုံနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ၀င်၇မည်မဟုတ်။ စိတ်၀ိညာဉ်ထဲမှာ အမှန်တကယ်သိကျွမ်းခြင်းမရှိလျှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံ၀င်၇မည်မဟုတ်ကြောင်းထပ်မံသတိပေးလိုပါသည်။
ထို့နည်း တူစွာရှင်လုကာ ခရစ်၀င်ကျမ်းတွင်လည်း အောက်ပါတိုင်းဖေါ်ပြထားလေသည်။ အိမ်ရှင်သည် ထ၍တံခါးကိုပိတ်ပြီးမှ၊ သခင် ၊သခင် အကျွန်ုပ်တို့အား၊ တံခါးဖွင့်ပေးပါဟု တောင်းလျှောက်သော်လည်း၊ သခင်က၊ သင်တို့သည် အဘယ်ကလာသည်ကို ငါမသိဟု ပြန်ပြော လိမ့်မည်။ တိုအခါသင်တို့ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အထံတော်၌စားသောက်ပါပြီ။ အကျွန်ုပ်တို့နေသောမြို ့ရွာ ၌ ကိုယ်တော်သည်ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူပြီဟုဆိုသော်လည်း၊ သခင်က၊ သင်တို့သည် အဘယ်ကလာသည်ကို ငါမသိ။ ငါ့ထံမွ ဖယ်သွားကြဟုပြောလိမ့်မည်။ (လု ၁၃း၂၅-၂၇)။
ဤေနရာ၌ ကျွနု်ပ်တို့သတိပြုရမည့် အချက်မှာ၊ အရှင်ယေရှု ပြန်လည်ဖြေကြားချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့သည် အဘယ်အရပ်ကလာသည်ကို မသိ ဟူသော အခ်က္ကို ဆင်ခြင် သင့်ပါသည်။ ခရစ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့တယောက်စီကို ဤ သို့ဖြေဆိုပါက မည်သို့တုန့် ပြန်ကြမည်နည်း။ တချို ့ကဤသို့ ဖြေဆိုလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်ဘာကြောင့် ကျွန်တော့် ကို မသိသလဲ။ ကိုယ်တော်မွေးနေ့ (Christmas) ပွဲဖြစ်မြောက်ေ၇းကော်မီတီမှာ ကျနော် ဟာ ဥက္ကဌ လုပ်ခဲ့တာလေ။ တချို့ကကိုယ်တော်ဘာဖြစ်လို့ ကျနော့်ကို မသိတာလဲ? ကျွန်တော်က (Christmas) ပွဲတော်အတွက် ဘဏ္႑ရှာဖွေေ၇းတာ၀န်ခံလေ။ ကိုယ်တော်ကျွန်တော့်ကို မသိတာလြန္တယ္ကြ။ ကျွန်တော်က ထိုမွေးနေ့ပွဲတော်မှာ တရားဒေသနာကောင်းကောင်းဟောပြေခဲ့တယ်လေ ဟူ၍ တချို့တရားဟောဆရာများဖြေဆိုကြလိမ့်မည်။ တချို ့လူငယ်များ က ကိုယ်တော်ကျွန်တော့်ကို တော့သိဘို့ကောင်းတာပေါ့။ ကျွန်တော်က ခရစ္စမတ်ပွဲရောက်တိုင်း carol singing ဦးဆောင်ပြီး၊ နေ့မအား၊ညမနား တအိမ်တက်တအိမ် ဆင်း သီချင်းဆိုရင်း အလှူငွေရှာခဲ့တာလေ။
တချို့အသင်းတော်လူကြီး မ်ားက ဤသို့ပြောပေလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်အခြားလူတွေ ကို မသိရင်နေ။ ကျွန်တော့်ကို တော့သိသင့်တယ်။ ဘာဖြစ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ်တော့်မွေးနေ့တိုင်း အစားအသောက်၊ ချက်ပြုတ်တာ၀န်ယူခဲ့တာ လေ။ စသည် စသည်ဖြင့် အသီးသီးကိုယ်တော်ကို ဆင်ခြေပေးကြပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ခရစ်တော်၏ ၀ိညာဉ် မရလျှင်၊ သင်တို့ကို ငါမသိ၊ ငါ့ထံမွ ဖယ်သွားကြဟု ပြောလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်မှပြန်လည်နောင်တရလဲ အခွင့်အရေး မရှိတော့သည့်ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဤအခြေအနေမိျုး မရောက်မှီ၊ မိမိအသက္တာကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး ခရစ်တော်ကိုမရသေးလျှင်အပူတပြင်း (Christmas) ကာလမွာ မရရအောင် ကယ်တင်ခြင်းကို လေ့လာကြပါစို့။
အေရွ ့ပြည် မွ မာဂုပညာရွိမ်ား။
အေရွ ့ပြည်မှလာသော ပညာရှိတို့သည် အဘယ်ကြောင့်ခရစ်တော်ကို ဖူးမြင်နိုင်သနည်း။ ယခုဘွားမြင်သော ယုဒရှင်ဘုရင်သည်၊ အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်း။ အေရွ့ပြည်၌၊ သူ၏ ကြယ်ကို မြင်ရသည် ဖြစ်၍၊ ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းငှါ ရောက်လာပြီဟု မေးမြန်းပြောဆိုကြ၏ (မဿဲ ၂း၂)။
ဤမာဂုပညာရှိတို့သည် ကြယ်ကို အမှီပြုပြီး၊ ကြယ်နောက်ကိုလိုက်ပြီး အရှင်ယေရှုကို ဖူးတွေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုပညာရှိတို့သည်၊ အေရွ ့ပြည်၌ မြင်ရသော ကြယ်သည် သူတို့ရှေ့က သွားသဖြင့် သူငယ်တော် ရှိရာအရပ်၌ အပေါ်သို့ ရောက်၍ တည်လျက်နေ၏။ ထိုကြယ်ကို မြင်ပြန်သောအခါ၊ အလွန်၀မ်း မြောက်၀မ်းသာခြင်းရှိ၍၊ အိမ်သို့၀င်လေသော်၊ မယ်တော် မာရိ နှင့် တကြ၊ သူငယ်တော်ကိုတွေ့ မြင်လျှင်၊ ပြပ်၀ပ်ကိုးကွယ်၍၊ မိမိတို့ ဘဏ္႑ဥစ္စာတို့ကို ဖွင့်ပြီးမှ၊ လောဗန်နှင့် မုရန်တည်းဟု သော၊ နံံ့သာမျိုးကို ၎၊ ရွှေကို၎င်းဆက်ကပ်ပူဇော်ကြ၏ (မဿဲ ၂း၉-၁၂)။
လမ်းပြကြယ်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့်၊ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသော မြေကြီး နှင့်မိုးကောင်း ကင်၊ ရေမြေ၊ တောတောင် သဘာ၀မ်ားကို ထောက်ရှုသဖြင့် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား ကို သိနိုင်ကြောင်းသင်္ခန်းစာရယူနိုင်သည်။ဆာလံဆရာ ဒါ၀ိဒ်မင်းကြီးက၊ ဤသို့ သီချင်းစပ်ဆိုခဲ့လေသည်။ မိုးကောင်းကင်သည်၊ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းအသရေတော်ကို ကြားပြော၍၊ မိုးမျက်နှာကြက်သည်လည်း၊လက်တော် နှင့် လုပ်သော အရာမ်ားကို ပြသ၏။ တနေ့ကို တနေ့မြွက် ဆို၍၊ တညကို တညသွန်သင်၏။ နှုတ်မြွက်ခြင်း၊ စကားပြောခြင်းမရှိ၊ သူတို့နှုတ်ထွက်သံကို မကြားရသော်လည်း၊ သူတို့၏ အသံသည် ပြေတပြင်လုံး၌န့ှံပြား၍ ၊ သူတို့၏စကားသည်၊ မြေကြီး စွန်းတိုင်အောင်ရောက်လေ ၏။ (ဆာလံ ၁၉း၁-၄)။
ဘုရားသခင်သည် လူမျက်စိဖြင့်အဘယ်သူမျှမမြင်နိုင်သော်လည်း၊ သူဖန်ဆင်းသော အရာများကိုထောက်ရှုခြင်းဖြင့်သိနိုင်သည်။ မိုးကောင်းကင်၌ရှိသော၊ နေ၊ လ၊ ကြယ်တို့သည်၊ စကားပြောခြင်းမရှိ၊ အသံမကြားရသော်လည်း၊ လင်းလက်နေသော အရာမ်ားကို မြင်တေ့ွခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းအသရေတော်ကို မြင်နိုင်သည်။ ထိုနည်းတူ တမန်တော်ပေါလုက ရောမဩဝါဒစာ၌ ဤသို့ဖေါ်ပြထားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ သိအပ်သော ဘုရာသခင်၏ အကြောင်းရာတို့သည်၊ သူတို့တွင်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အားပြတော်မူပြီ။ အဘယ်သို့နည်း ဟူမူကား ဖန်ဆင်းတော်မူသော အရာတို့ကို ထောက်ရှုသဖြင့် ထာ၀ရတန်ခိုးတော်နှင့် ထာ၀ရ အဖြစ်တော်တည်း ဟူသော မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်၏ အရာတို့သည် ကမ္ဘာတည်ကာလ မွစ၍ ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ (ရောမ ၁း၁၉-၂၀)။ သူတို့၏ အသံသည်၊ မြေတပြင်လုံး၌နှံ့ ပြား၍၊ သူတို့၏ စကားသည် ပြေကြီး စွန်းတိုင်အောင်ရောက်လေပြီဟု ငါဆို၏ (ရောမ ၁၀း၁၈)။
ထို့အတူရှင်ပေါလုက ကျမ်းစာ၌ ဖေါ်ပြထားသည်မှာ၊ အိမ်မည်သည်ကား တစုံတယောက်သောသူဆောက်ကြောင့်ဖြစ်၏။ အလုံးစုံတို့ကို တည် ဆောက်သော သူကား၊ ဘုရားသခင်ပေတည်း။ (ဟေဗြဲ ၃း၄)။ ထို့ကြောင့်မယုံကြည်သေးသောသူ များအနေဖြင့်ဖန်ဆင်း ထားသော အရာမ်ားကို ထောက်ရှုသဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုတွေ့ နိုင်ကြောင်း အေရွ့ပညာရွိမ်ား၊ ကြယ်ကို ထောက်ရှုပြီး၊ ယေရှုကိုဖူးမြင်နိုင်ခြင်းက သက်သေထူလျက်ရှိပေသည်။
ယဇ်ပရောဟိတ်များနှင့်၊ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ သည် ခရစ်တော်အဘယ်မှဖွားမြင် လိမ့်မည်ကိုကျမ်းစာအားဖြင့် သိကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ပရောဖက် မိက္ခာက အိုဗက်လင် ဧဖရတ်မြို ့အ စိုးရသောယုဒမြို ့တို့တွင်၊ သင်သည် မြို ့ယုတ်ဖြစ်သော်လည်း၊ ဣသေရလ အမျိုး ကို အုပ္စိုး သော၊ သခင်သည် ငါ့ အဘို့သင်၏ အထဲမှာပေါ်ထွန်းလတံ့။ ထိုသခင်သည် ရှေး ကပ်ကမ္ဘာမှစ၍ ပေါ်ထွန်း သော သခင်ဖြစ်၏ (မိက္ခာ ၅း၂)။ ဤကျမ်းချက်ကို ကျမ်းတတ်တို့သည် အကြိမ်ကြိမ် ဖတ်ရှုသော်လည်း၊ ထာ၀ရသက္ကို မရကြ။ အရှင်ယေရှု ကဤသို့ မိ်န့်ဆိုခဲ့သည်။ ကျမ်းစာ အားဖြင့် ထာ၀ရ အသက္ကို ၇မည်ဟု စိတ်ထင်နှင့် သင်တို့သည် ကျမ်းစာကို စေ့စေ့ကြည့်ရှုကြ၏။ ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏ သက်သေဖြစ်၏။ သင်တို့သည် အသက္ကို ရအောင်ငါ့ထံသို့လာခြင်းငှါ အလိုမရှိကြ (ယော ၅း၃၉-၄၀)။ ကျမ်းတတ်ရုံနှင့် ထာ၀ရအသက်မရနိုင်။ ပညတ်တရားအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ မရောက်နိူင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ပညတ်တရားသည် ခရစ်တော်ထံသို့ ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ ငါတို့၏ အထိန်းဖြစ်သတည်း (ဂလာတိ ၃း၂၄)။ ပညတ်တရားသည် ခရစ်တော်မပါဘဲ၊ ငါတို့ကို စုံလင်ခြင်းမပေးနိုင်။ အရှင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည် မွာ၊ မောရှေ သည် သင်တို့အား၊ ပညတ်တရားကိုပေးတော်မူသည်မဟုတ်လော။ ထိုတရားကို သင်တို့တွင်တစုံတယောက်မျှမကျင့် ငါ့ကို သတ်အံ့သောငှါ၊ အဘယ်ကြောင့်ရှာကြံကြသနည်း (ယော ၇း၁၉)။
ထို့ကြောင့် အဘယ္သူမွ် ပညတ်တရားတော်ကို တခုမကျန်ကျင့်နိုင်သူမရှိ။ ပညတ်တရားအလုံးစုံကို ရှောက်စောင့်သည် တွင်တစုံတခု၌ မှားမိလျှင်၊ ပညတ္တရားအ လုံးစုံကိုလွန်ကျူး သောအပြစ်ရှိ၏ (ယာကုပ် ၂း၁၀)။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ ့တော်၌ ပညတ်တရားအားဖြင့် အဘယ်သူမျှဖြောင့်မတ်ရာသို့ မရောက်နိုင်ဟု ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ (ဂလာတိ ၃း၁၃)။
ထို့ကြောင့်စုံလင်ခြင်းသို့ ရောက်လိုသောသူတိုင်း၊ ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော် တပါးကိုသာ ယုံကြည်ရပေမည်။ ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်မည် အကြောင်း ၊ ပညတ်တရားသည် ခရစ်တော်အားဖြင့်စုံလင်ခြင်းရှိ၏ (ရောမ ၁၀း၁၄)။ ကျမ်းစာတချက်၌ ထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် မောရှေ၏ တရားအတိုင်း မလွတ်နိုင်သော အပြစ်ရှိသမျှတို့နှင့် လွတ်ရကြသည် ကို၎၊ သိမှတ်ကြလော့ (တ ၁၃း၃၉)။ သို့ဖြစ်၍ သင်သည်သခင်ယေရှုကို နှုတ်ဖြင့်၀န်ခံ၍၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကို သေခြင်ူမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟု စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည် (ရောမ ၁၀း၉)။
ဤ ခေတ်ဤလောက၌ သိုးကျောင်းသားဘ၀သည်၊ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော အလုပ်၊ အဆင့်နိမ့်ကျသော အလုပ်၊ ဆင်းရဲ သားမ်ား အလုပ်သာ ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် အဆင့် အတန်းမခွဲ ခြား၊လောကီသား အပေါင်းတို့ကို အညီအမျှချစ်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည် သူ့ကောင်းကင်တမန်ကို၊ သိုးထိန်းများထံအေ၇ာက်စေလွှတ်ခဲ့လေသည်။ ထာ၀ရဘုရားသ ခင်၏ ကောင်းကင်တမန်သည်သူတို့အနားမှာ ပေါ်လာ၍၊ လူအပေါင်းတို့သည် အလွန်၀မ်းမြောက်၀မ်းသာ စရာသတင်းကို၊ သင်တို့အားကြားပြောရ၏။
ယနေ့တွင်ဒါ၀ိဒ်၏ မြို့၌သခင်ခရစ်တော်တည်းဟူသော၊ ကယ်တင်သောအရှင်သည်၊ သင်တို့အဘို့အလိုငှါ၊ ဖွားမြင်ခြင်း ကိုခံတော်မူပြီ။ သူငယ်တော်သည် အ၀တ်နှင့်ပတ်ရစ်၍ နွားစားခွက်၌သိပ်ထားလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ကြလိမ့်မည်။ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်ကြပြီးမှ သိုးထိန်းတို့သည် အလျင်အမြန်သွား၍ မာရိနှင့် ယောသပ်ကို ၎၊ နွားစာခွက်၌ သိပ်ထားလျက်ရှိသော၊ သူငယ်ကို၎င်းတွေ့ကြ၏။ တွေ့မြင်ပြီးမှ မိမိတို့ကြားသောထိုသူငယ်၏ အကြောင်းစကားကို အနှံ့အပြား ပြောကြ၏။ သိုးထိန်းတို့ပြောသောစကားကို ကြားသောသူရှိသမျှတို့သည် အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ (လုကာ ၂း၁၀-၁၈)။
ချစ်စွာသောဓမ္မ မိတ်ဆွေ၊ ယခုခေတ်ကာလမှာ၊ ရှေးခေတ်အခါကကဲ့သို့ကယ်တင်ရှင်ယေရှု အကြောင်းကို၊ သင့်အားဟောပြောဘို့၊ ဘုရားသခင်သည်၊ ကောင်းကင် တမန္မ်ားအား စေလွှတ်မည် မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်ဧဝံဂေလိ တရားတည်းဟူသော ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းဟောပြောရန်အတွက်၊ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် အသွေးတော် နှင့်ရွေး၀ယ်ခြင်းခံရသောသူများမဟုတ်ပါ။ ကောင်းကင်တမန်တို့မူကား၊ ယုံကြည်သူများ အတွက်အစေခံများသာဖြစ်လေသည် (ဟေဗြဲ ၁း၁၄)။ ထို့ကြောင့် ယနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာ၊ ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းဟောပြောရန်အတွက်၊ ခရစ်တော်က ယုံကြည်သူတပည့်တော်တို့အား သာ တာ၀န်ပေးထားကြောင်းကျမ်းစာ၌ တွေ့ရပါသည်။ သင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှသို့သွား၍ ေ၀နေယျသတ္တဝါ အပေါင်းတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြလော့။မာကု ၁၆း-
ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရောက်ဘို့ကောင်းကင်တမန်များကို စောင့်နေ၍ မျပီး။ သင်းအုပ်ဆရာများ၊ ဧဝံဂေလိဆရာများ၊ ယုံကြည်သူ (Born again) ထံမှာချဉ်းကပ်ပြီးကယ်တင်ခြင်း တရားကို လေ့လာခံယူကြပါစို့။
ချစ်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေဤေနရာ၌ ကယ်တင်ခြင်းကိုယနေ့တိုင်မရှင်းလင်းသေးသော သူများအတွက်၊ အတိုချုံးပြီးဖေါ်ပြပါရစေ။ လူသည်အပြစ်ကြောင့်ဘုရားသခင်နှင့် ကင်းကွာခဲ့ပြီးရန်သူဖြစ်ခဲ့ပြီ။ အပြစ်သားအားလုံးသည်၊ အာဒံ၏ နားမထောင်ခြင်းအပြစ်တခု ကြောင့်အိုနာသေသောအခါ၊ ထာ၀ရငရဲသို့လားရပေတော့မည်။
အပြစ်တရား၏အခကားသေခြင်းပေတည်း (ရောမ ၆း၂၃)။ မွေးကတည်းက အပြစ်ပါလာသောကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား အားလုံး၊ ငရဲသွားရမည့်ကိန်းကိုဘုရားသခင်သိမြင် သောကြောင့် တပါးတည်းသော သားတော်ယေရှုခရစ်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်သည် အပြစ်ရှိသော သူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ၊ ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည် ဟူသော စကားသည် သစ္စာတရားဖြစ်၏။ အကြွင်းမဲ့ခံယူအပ်သော စကားလည်း ဖြစ်၏ (၁ တိ ၁း၁၅)။
သို့သော်၊ ယေရှုခရစ် မကြွလာမှီ ဤေလာက၌ ဘာသာတရား များရှိနှင့် ပြီဖြစ်သော ကြောင့်လူတို့သည်၊ မိမိဘာသာတရားအားဖြင့် ကောင်းရာသို့ရောက်ရာရောက်ကြောင်းကြိုးစား ကျင့်ကြံ လျက်ရှိကြောင်းတွေ့၇၏။ အျပစ္သားလူ၏ အကျင့်၊ သီလ၊ ကောင်းမှုကုသိုလ် မ်ားကို ဘုရားရှင်လက်မခံပါ။ ဘုရားသခင်သည် မိုက်မဲသော အချိန်ကာလ (ခရစ်တော်မကြွလာမှီကလ) ကိုအမှုမထားဘူးသော်လည်း ယခုမွာ၊ ကိုယ်အပြစ်ကို မြင်၍ နောင်တရကြလော့ ဟုခပ်သိမ်းသော အ၇ပ်တို့၌ ရှိသော လူအပေါင်းတို့အား ပညတ်တော်မူ၏ (တ ၁၇း၃၀)။ ဘယ်အပြစ်ကို နောင်တရ၊ ရမည်နည်း။ မိမိလုပ်နေသော အပြစ်ဒုစရိုက်ကို မဆိုလိုပါ။ ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်အားကိုးမည့် အစားမိမိ၊ ရိုးရာ၊ ဘာသာ၊ အယူဝါဒကို၊ ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမှ နောင်တရ၍၊ အရှင်ယေရှုခရစ်ကို၊ မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ဖြင့်လက်ခံယုံကြည်ရပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ယေရှုခရစ်သည် မိတ်ဆွေ၏ အပြစ် အခအတွက် အေသခံခဲ့ျပီး၊ ဒုစရိုက်ရှိသမျှ အား၊ မိမိအသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောပေးခဲ့လေသည်။၁ယော၁း၇။ တကြိမ်တည်းဖြင့်မိတ်ဆွေ၌ရှိသမျှ အျပစ္မ်ားကို ပယ်ရှင်းခဲ့လေပြီ။ဟေဗြဲ၁၀း၁၀။ အေသခံ၍ သဂြိုဟ်ပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်တော်မူ၏။၁ကော၁၅း၃-၄။ အရှင်ယေရှုသည် မနေ့၊ ယနေ့ ၊ နောင်ကာလ မပြောင်းမလဲ အသက်ရှင်တော်မူ၏။ဟေဗြဲ၁၃း၈။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊ ထိုသခင်ယေရှု ကိုမိမိကယ်တင် ရှင် အဖြစ် နှုတ်ဖြင့် ၀န်ခံ၍၊ ဘုရားသခင်သည် သေခြင်းမှထမြောက်စေတော် မူပြီဟု စိတ်နှလုံး ထဲမွာ ယုံကြည်လျှင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။
ကယ်တင်ခြင်းရောက်သည့် အခိျန်မှာ ဘု၇ားသား ဖြစ်ကြ၏။ယော၁း၁၂။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ဟုမူကား၊ သင်တို့အပေါင်းသည်၊ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏သား ဖြစ်ကြ၏ (ဂလာတိ ၃း၂၆)။
ချစ်သောဓမ္မ မိတ်ဆွေ၊ တချို ့က၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှ ဒုစရိုက်ပြန်လည်ပြုမိလျှင်ငရဲ သို့ပြန်ရောက်မည်ဟု၊ ခံယူ ယုံကြည်လျက်သွန်သင်နေကြောင်းတွေ့ရ၏။ (ဥပမာ) တခုပေးပါရစေ။ လိပ်ပြာ၏ ဘ၀ကို ကြည့်ပါ။ လောက်လန်းဘ၀မှ၊ ပိုးတုံးလုံးဘ၀၊ ပိုးတုံးလုံး ဘ၀မွ သည် လိပ်ပြာသို့ကူးမြောက်သွားပြီးသော အခါ၊ လောက်လန်းဘ၀သို့ ပြန်မရောက်နိုင်ပါ။ ထို့အတူ အျပစ္သား (ဝါ) စာတန္သားမွ၊ ဘုရားသားသို့ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး၊ ဘုရားသားမွ မာရ်နတ်သားပြန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသားအထဲ၌ သားတော်၏ ၀ိညာဉ်ကို ရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ ရက်တိုင်အောင် တည်နေဘို့တံဆိတ်ခတ်ထားသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ဧဖက်၁း၁၃-၁၄။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသားသည် ဒုစရိုက်ပြုမိပါက၊ ၀ိညာဉ်တော်စိတ်နာစေပြီး၊ ထပ်ခါတလဲပြုပါက ဘုရားသခင်၏ ဆုံးမခြင်းခံ၇မှာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ နောင်တနရပါက၊ ခန္ဓာသေသည် အထိဆုံးမဒဏ်ခတ်ခြင်းခံပြီးမှ ၀ိညာဉ်သည်၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။၁ကော၅း၅။
ကယ်တင်ခြင်းမရှုံးနိုင်သော်လည်း ဆုံးရှုံးမှုများ စွာရှိသည်။ ၀မ်းမြောက်ခြင်း၊ လောက၊ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ၊ ၀ိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများ၊ ကောင်းကင်၌ ရရှိမည့် ဆုလဒ်များဆုံးရှုံး နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသည်၊ ကျေးဇူးတော်သက်သက်ဖြစ်ပြီး၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာရရှိလျက်၊ ထာ၀ရကာလအတွက်ဖြစ်ကြောင်း အတိုချုံးပြီးတင်ပြအပ်ပါသည်။ဧဖက်၂း၈-၉။ ခရစ်ယာန်အသက်ရှင်ခြင်းမူကား၊ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်၊ ယုံကြည်သူအထဲ၌ အသက်ရှင်လျက် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော် အတိုင်း နေ့စဉ်၀န်ခံခြင်းဖြစ်သည်။
၁။ လူအပေါင်းတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍ သမ္မာတရားသိရန်.. (၁ တိ ၂း၄)။
၂။ ရေဆာနေသော အရှင်ယေရှုကို ရေတိုက်ရန် (ယော ၁၉း၂၈)။ ဆိုလိုသည်မှာ ပျောက်ဆုံး၀ိညာဉ်များ ဖမ်းပြီး၊ ခရစ်တော်၏ ဆာလောင်မှုကို ဖြည့်ပေးရန်။
၃။ ဗိုက်ဆာနေသော အရှင်ယေရှုကို အစာကျေွးရန်။ တပည့်တော်တို့သည်၊ အရှင်ဘုရားအစာကို သုံးဆောင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်လျှင် သင်တို့ မသိသောစားစရာသည် ငါ၌ရှိတော်မူ၏ ဟုမိန့်တော်မူ၏။ တဖန်ယေရှုကငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏ အလိုတော်ကို ဆောင်ခြင်း၊ သူ၏အမှုတော်ကို ပြီးစီးခြင်းအမှုသည် ငါ့စားစရာဖြစ်၏။ (ယော ၄း၃၂-၃၄)။
၄။ လွန်ကျူးစေတတ်သော စပျစ်ရည်နှင့်၊ ယစ်မူးခြင်းကို ရှောင်၍၊ ၀ိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်စုံရန်။ အရက်၊ဆေးလိပ်၊ကွမ်းယာ၊ ခိုင်နီး မ်ားကို ရှောင်ရန်။ ၀ိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်စုံရန် (ဧဖက် ၅း၁၈)။
၅။ မတရားသောမေထုန်မှီ၀ဲခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသော ကိလေသာ ညစ်ညူးခြင်း၊ လောဘလွန်ကျူးခြင်း၊ အမှုတို့ကို သန့်ရှင်းသူတို့သည့် ရှောင်သင့်သည့် အတိုင်း၊ စကားဖြင့်မျှ မဆက်ဆံကြနှင့် (ဧဖက် ၅း၃)။
၆။ ထို့ကြောင့် မုသာစကားကို ပယ်ရှား၍၊ မှန်သော စကားကိုသာ အချင်းချင်း တယောက်ပြောကြလော့။
၇။ ထာ၀ရဘု၇ားသည်၊ သိုးထီးတထောင်၊ ဆီမီးတသောင်း ကိုအားရနှစ်သက်သည်ထက်၊မိမိလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်အတွက်၊သားဦးကို၎င်း၊ စိတ်၀ိညာဉ်၏ အပြစ်အတွက်ငါ၏ ရင်သွေးကို၎င်း ပူဇော်တာထက်၊ တရားသဖြင့် ပြုခြင်း၊ ကရုဏာကိုနှစ်သက်ခြင်း၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌၊ နှိမ့်ချသောစိတ်နှင့် ကျင့်နေခြင်း၊ မှတပါးအဘယ်ပူဇော်သက္ကာ ကိုထာ၀ရဘုရားတောင်းတော်မူသနည်း(မိက္ခာ ၆း၆-၇)။
၈။ ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသော ယဇ္မူကား၊ ကျိုးပဲ့သောစိတ်ပေတည်း။
၉။ ခမည်းတော် ဘုရားသခင်ရှေ ့၌ စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော သီလမူကား၊ မိဘမရှိသောသူငယ်တို့နှင့်၊ မုတ်ဆိုးမတို့သည် ဆင်းရဲခံ၇ သောအခါ၊ သူတို့ကို ကြည့်ရှု၊ပြုစုခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်လည်း လောကီအညစ်အကြေးနှင့် ကင်းစင်အံ့သော ငှါစောင့် ရှောက်ခြင်းပေတည်း (ယာကုပ် ၁း၂၇)။
၁၀။ ဆယ်ဘို့တဘို့ရှိသမျှတို့ကို ဘဏ္႑ာတိုက်ထဲသို့ထည့်ရန် (မာလခိ ၃း၁၀-၁၂)။
ချစ်သောဓမ္မ မိတ်ဆွေ၊ သင်သည် (Christmas) ၏အဓိပ္ပါယ်ကို သိသည် သာမက၊ မွေးနေ့ရှင် အရှင်ယေရှုခရစ်၏ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း၊ တာ၀န်ကျေပြွန်၌ပါစေ။ Christmas အခါသမယမွာ၊ သခင်ယေရှုခရစ်သည် သင်၏ စိတ်၀ိညာဉ်နှင့် အတူရှိတော်မူပါစေသော။ သင်၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း။(အာမင်)။
Rev. Dr. Paul Khay Kyaing .
Shwe Canaan TV: CHRISTMAS အဓိပ္ပါယ်နှင့် “မွေးနေရှင်၏ တောင်းဆိုချက်”